हात खुट्टा झमझमाउने र निदाउने समस्या छ ? हुनसक्छ यस्तो खराबी – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / हात खुट्टा झमझमाउने र निदाउने समस्या छ ? हुनसक्छ यस्तो खराबी
admin October 31, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 141 Views
Previous के राति सुत्दा मुखबाट र्‍याल चुहिन्छ ? सावधान ! हुनसक्छ यस्तो बिमारीको संकेत !
Next हिजोसम्म श्रीमान्–श्रीमती थिए, अहिले आमा छोरा बने, ससुराको मायामा परिन् नयाँ दुलही